यसरी गर्न सकिन्छ सेतो दुवीको उपचार | NepalDut
यसरी गर्न सकिन्छ सेतो दुवीको उपचार
प्रत्येक मानिसको शरीरमा कुनै न कुनै किसिमको रङ्ग हुन्छ । मानिस छालामा गर्भमै रहँदा एक किसिमको कोषको विकास भएको हुन्छ, जसलाई मेलानोसाइट भनिन्छ । यो एक किसिमको केमिकल हो र जसले शरीरमा रङ्ग दिने काम गर्छ ।
यो रंग जसको शरीरमा बढी हुन्छ त्यस्तो छालालाई कालो छाला भनिन्छ भने जसको छालामा कम हुन्त त्यस्तो छालालाई गोरो छाला भनिन्छ ।
(क्यूटिज केयरका वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. धर्मेन्द्र कर्णसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)